TIM Alakamisy Fenoarivo : tokana ihany ny antoko – MyDago.com aime Madagascar
Tontosa tao amin’ny espace Trio teny Alakamisy Fenoarivo ny fanetsehan’ny Birao Foiben’ny antoko Tiako i Madagasikara ny » lafiky ny antoko » (base) io tolakandro io, notarihan »ny solombavambahoaka isany Pst Mamitiana Ravelonanosy sy Dr Jules Andriamaholison.
Vory maro ny vahoaka nihaino ny hafatra nampitain’ireto mpitarika ireto, tamin’izany no nilazan’izy ireo fa manana anjara lehibe ny tanora ny amin’ny fitsenana ny filoha Ravalomanana.
Ny pasitera Mamtiana dia nampitandrina ho mailo ny mpikambana fototra tsy handairan’ny fizarazarana « tokana ihany ny TIM » dia izay manohana ny filoha Ravalomanana sy mankatoa ny baiko omeny hoy izy.
Ny Dr Jules kosa dia nanambara fa noraisin’ny filoha Jacob Zuma ny fitantanana ny » Troika » koa dia manana fanantenana isika hoy izy fa amin’ny 4 Aogostra ho avy izao dia hivory ny amin’ny famerenana ny filoha Ravalomanana an-tanindrazana ny Troika ary hanamafy ny voalazan’ny CPS indray.
Précédent Article précédent : TMR : tsy vahaolana io « fifidianam-poza » io;
Suivant Article suivant : Mpiambina ny mpitondra FAT : manao didin’ny be sandry hatrany